Olee Otú Jizọs Dị?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bulgarian Catalan Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikamba Kinyarwanda Kirundi Korean Kwanyama Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (European) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Sepedi Serbian Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba
O nweghị onye ma otú Jizọs dị n’ihi na Baịbụl akọwaghị otú ọ dị n’elu ahụ. Ihe nke ahụ gosiri bụ na otú Jizọs dị n’elu ahụ́ adịghị mkpa. Mana, Baịbụl kwuru ihe nwere ike inyere anyị aka ịmata otú Jizọs dị.
Otú ọ dị: Jizọs bụ onye Juu. O nwere ike ịbụ na o yiri mama ya bụ́kwa onye Juu. (Ndị Hibru 7:14) Ọ yighị ka ọdịdị ya ọ̀ dị iche na nke ndị ọzọ. E nwere mgbe o si Galili gaa Jeruselem n’enweghị onye matara na ọ bụ ya. (Jọn 7:10, 11) O dokwara anya na otú ọ dị adịghị iche na otú ndị na-eso ụzọ ya dị. Cheta na ọ bụ Judas Iskarịọt mere ihe ndị ahụ bịara ijide ya ji mara na ọ bụ ya bụ Jizọs.​—Matiu 26:47-49.
Otú ntutu isi ya hà: O yighị ka ntutu isi Jizọs ò toro ogologo n’ihi na Baịbụl sịrị na “ọ bụrụ na nwoke enwee ogologo ntutu isi, ọ bụụrụ ya ihe ihere.”—1 Ndị Kọrịnt 11:14.
Otú afụ ọnụ ya hà: Jizọs ruwere afụ ọnụ. O mere ihe dị n’iwu ndị Juu bụ nke machiri ụmụ nwoke ịkpụchapụ “ọnụ ọnụ ajị agba” ha. (Levitikọs 19:27; Ndị Galeshia 4:4) N’amụma e buru gbasara ahụhụ Jizọs ga-ata, Baịbụl kpọtụrụ ajị agba ya aha.​—Aịzaya 50:6.
Otú ahụ́ ya dị: Ihe niile e kwuru na Baịbụl gosiri na ahụ́ gbasiri Jizọs ike. Mgbe ọ na-aga ozi ọma, ọ gara iji ọtụtụ maịl. (Matiu 9:35) Ọ chụpụrụ ndị na-ere ahịa n’ụlọ nsọ ugboro abụọ, kpuo tebụl ndị na-agbanwe ego n’ala, jiri ụtarị chụpụ ndị niile na-ere atụrụ na ehi ebe ahụ. (Luk 19:45, 46; Jọn 2:14, 15) Ọtụ akwụkwọ a na-akpọ McClintock and Strong’s Cyclopedia Mpịakọta nke IV, peeji nke 884 kwuru sị: “Ihe niile e dere n’Oziọma gosiri na ahụ́ gbasiri Jizọs ike.”
Otú ihu ya na-adị: Jizọs na-emesapụ ihu, o nwekwara obiọma. O doro anya na otú ihu ya na-adị gosiri ya. (Matiu 11:28, 29) Mmadụ niile na-abịakwute ya ka o nyere ha aka. (Luk 5:12, 13; 7:37, 38) Obi na-erudị ụmụaka ala ma ha na ya nọrọ.​—Matiu 19:13-15; Mak 9:35-37.
Ihe ndị na-abụghị eziokwu ndị mmadụ na-ekwu banyere otú Jizọs dị
Ụgha: Ụfọdụ sị na ọ ga-abụrịrị na Jizọs bụ onye Afrịka n’ihi na akwụkwọ Mkpughe ji ntutu isi ya tụnyere owu jirikwa ụkwụ ya tụnyere “ezigbo ọla kọpa.”​—Mkpughe 1:14, 15.
Eziokwu: Ihe ụfọdụ e dere n’akwụkwọ Mkpughe bụ “ihe atụ.” (Mkpughe 1:1) E ji otú e si kọwaa ntutu isi ya na ụkwụ ya kọwaa àgwà ndị o nwere mgbe a kpọlitechara ya n’ọnwụ, ọ bụghị otú ọ dị mgbe ọ nọ n’ụwa. Mkpughe 1:14 kwuru na “isi ya na ntutu isi ya na-achakwa ọcha dị ka owu ọcha, dị ka snoo.” Ihe a na-ekwu okwu ya ebe a abụghị otú ntutu isi ya dị, kama, ọ bụ otú ọ na-acha. Otú isi ya na-acha nọchiri anya amamihe ihe o nwere, n’ihi na ọ dịla anya e kere ya. (Mkpughe 3:14) Ebe a anaghị ekwu na isi Jizọs dị ka owu ma ọ bụ na ọ dị ka snoo.
Ụkwụ Jizọs dị ka “ezigbo ọla kọpa nke na-egbukepụ n’oké ọkụ.” (Mkpughe 1:15) Ihu ya dịkwa ka “anyanwụ nke na-achasi ike.” (Mkpughe 1:16) Ebe ọ bụ na e nweghị ndị akpụkpọ ahụ́ ha na-acha otú a, ọ ga-abụ na e ji ya gosi na Jizọs bụ “onye bi n’ìhè a na-apụghị iru nso” mgbe a kpọlitere ya n’ọnwụ.​—1 Timoti 6:16.
Ụgha: Jizọs akpaghị ume.
Eziokwu: Ihe ndị Jizọs mere gosiri na ọ bụ dimkpa. Dị ka ihe atụ, mgbe ìgwè mmadụ bịara ijide ya, ọ gwara ha na ọ bụ ya ka ha na-achọ. (Jọn 18:4-8) Ọ ga-abụrịrị na Jizọs gbasiri ike mere o ji bụrụ ọkwá nkà na-eji ngwá ọrụ siri ike arụ ọrụ.​—Mak 6:3.
Oleezi ihe mere e ji sị mmadụ nyere Jizọs aka buru osisi ịta ahụhụ ya? Oleekwa ihe mere o ji buru ndị ọzọ a kpọgidere ha na ya n’elu osisi ụzọ nwụọ? (Luk 23:26; Jọn 19:31-33) Tupu akpọgbuo Jizọs, ezigbo ike gwụrụ ya. Ọ mụ anya n’abalị bọtara ụbọchị ahụ niile. Ihe so kpata ya bụ na obi erughị ya ala. (Luk 22:42-44) Ndị Juu rụsara ya arụrụala n’abalị ahụ, ndị Rom akụọ ya duka duka n’ụtụtụ ya. (Matiu 26:67, 68; Jọn 19:1-3) O nwere ike ịbụ ihe ndị a niile so mee ka ọ nwụọ ọsọ ọsọ.
Ụgha: O nweghị mgbe ihu tọrọ Jizọs ọchị.
Eziokwu: Jizọs mere nnọọ ka Nna ya nke eluigwe, bụ́ onye Baịbụl kpọrọ “onye obi ụtọ.” (1 Timoti 1:11; Jọn 14:9) Jizọs kụzidịịrị ndị ọzọ ihe ha ga-eme ka ha na-enwe obi ụtọ. (Matiu 5:3-9; Luk 11:28) Ihe ndị a niile gosiri na otú ihu Jizọs na-adị na-egosi na ọ bụ onye obi na-adị ya ụtọ.
Gịnị Mere E Ji Akpọ Jizọs Ọkpara Chineke?
Ọ bụrụ na Chineke enweghị nwunye, olee otú Jizọs si bụrụ Ọkpara ya?
Ihe Ndị A Kọrọ na Baịbụl Gbasara Jizọs Hà Bụ Eziokwu?
Chọpụta ma ihe Matiu, Mak, Luk, na Jọn kọrọ hà bụ eziokwu. Leekwa ihe a chọpụtara ná mpempe akwụkwọ kacha mee ochie e nwere.